လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ငါစစ်ဝါရင့်ခွင့်နဲ့ကျွန်မ 51 တစ်နှစ် MIA, 25 နှစ်အတွင်းပြက္ခဒိန်နှစ်အတွင်းဝန်ဆောင်မှု၏အရှည်, အငြိမ်းစားငါ
ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်သမား ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကိုရထိုက်ခွင့်ရှိပါသလား၊ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၅၁ နှစ်ရှိပြီး၊ ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှအငြိမ်းစားယူပြီး၊ ပြက္ခဒိန်သက်တမ်း ၂၅ နှစ်ကျော်ရှိပါပြီ၊ သင့်အားပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ ၀ ါရင့်သူတစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ရပါမည်။
အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ၏ပင်စင်အတွက်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သနည်း။ နိုင်ငံသားတစ် ဦး သည်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ပင်စင်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့၏အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူလျှောက်လွှာပေးပို့ရမည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်အခြားသက်သေခံအထောက်အထား၊
ဖက်ဒရယ်အစိုးရအရာရှိများအဘယ်သူနည်း ??? 79 FZ ကိုကြည့်ပါ။ အလုပ်အကိုင်? ကျေးဇူးပြု၍ ရှေ့နေများ၊ စနစ်စီမံခန့်ခွဲသူများ၊ ဆရာဝန်များ၊ စာရင်းကိုင်များစသဖြင့်၊ အဓိကကတော့ ... လူတစ်ယောက်က ...
ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုအတွက်ညွှန်ကိန်းကိုဘယ်လောက်အထိတွက်ချက်သလဲ။ မိသားစုတစ်ခုလုံး (ကလေးများအပါအ ၀ င်) ၏စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေကိုမိသားစု ၀ င်အားလုံး၏အရေအတွက်ဖြင့်ယူသည်။ အကယ်၍ ရလဒ်သည်ဝမ်းစာမပြည့်မီပါကမိသားစုသည် ...
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ပါ ၀ င်သောမုဆိုးမ၏အကျိုးကျေးဇူးများကားအဘယ်နည်း။ အခမဲ့အိမ်ရာရရှိခြင်းအပါအ ၀ င် (လိုအပ်ပါက) ၎င်းတို့သည်အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သည် - အနုပညာအဆိုအရ။ သားကောင်များ၏မုဆိုးမများမှ "စစ်ပြန်အကြောင်း" ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ 21
ဖျားနာခွင့်ကိုမိဘစောင့်ရှောက်မှုပေးသလား။ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အားဖျားနာခွင့်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများကြောင့် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အားထုတ်ပေးနိုင်သည်။
အဘယ်အရာကိုဟောင်းများကို-အသက်အရွယ်ပင်စင်၏အစိတ်အပိုင်းများကို။ ဘယ်နှစ်ယောက် %% အခြေခံပညာနှင့်မည်မျှအာမခံ?
သက်ကြီးပင်စင်၏အစိတ်အပိုင်းများကဘာတွေလဲ။ အာမခံသည်မည်မျှရှိသနည်း။ အခြေခံသည်မည်မျှရှိသနည်း။ အကယ်၍ သင်သည်အသက် ၅၅ နှစ်အောက်အမျိုးသားတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်စီမံကိန်းအုပ်ချုပ်ရေး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပိတ်ဆို့ထားသည့်လူမှုဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုမူဆလင်လူမျိုးများကလက်ခံရရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
1985 2001 နှစ်ပေါင်းပင်စင်လစာ၏အာမခံစိတျအပိုငျးမြား၏တွက်ချက်မှုအဘို့ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအတွက်ပျမ်းမျှအားအရွယ်အစားလစာ၏စားပွဲ၏လိပ်စာကဘာလဲ?
၁၉၈၅ မှ ၂၀၀၁ အထိပင်စင်၏အာမခံအစိတ်အပိုင်းကိုတွက်ချက်ရန်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၌ပျမ်းမျှလစာ၏ဇယား၏လိပ်စာကဘာလဲ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဆိုက်တစ်ခုရှိပါသည်။ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ အတွက်အမြင့်ဆုံးလစာအချိုးသို့ရောက်ရန် ...
မည်သူကပစ်မှတ်ထားလူမှုကူညီမှုကိုရထိုက်သနည်း။ ဟယ်လို! ကျွန်ုပ်သည်မှတ်ပုံတင်ပြီးအသက် ၈၀ အရွယ်ရှိအကြီးအကဲတစ် ဦး အတွက်စောင့်ရှောက်မှုခံစားခွင့်များရရှိပါကပစ်မှတ်ထားအကူအညီကိုရနိုင်ပါသလား။ ကျွန်တော့် ... မရှိဘူး…
ဘယ်သူကအသက်ကြီးတဲ့နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသလဲ။ ပင်စင်စားတစ် ဦး သည်အထီးကျန်နေသည်ဟုဖော်ပြသည့်လက်မှတ်ကိုသင်မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။ အိမ်စာအုပ်မှထုတ်ယူထားသည့်လူတစ် ဦး သည်အထီးကျန်ပင်စင်စားတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့တတ်နိုင်သည့်တိုက်ခန်းတွင် ...
အနှစ် ၈၀ နောက်ပိုင်းပင်စင်လစာကိုမည်သည့်အပိုထပ်ဆောင်းပေးသနည်း။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်အမေအသက် ၈၀ မှာရူဘယ် ၁၄,၄၄၀ ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးပင်စင်လစာ ၉၁၉၄.၁၀ ရူဘယ်လ်။ သူတို့ဘယ်မှာထိုကဲ့သို့သောပမာဏရခဲ့တာလဲ alimony အကြောင်း, ငါ့ကိုပြောပြပါ ...
ဒါကြောင့်ကိုပိတ်ထားသည်သူငယ်၏မိခင်, 50 နှစ်အတွင်းဖြစ်နိုင်သမျှအနားယူရှိပါသလား?
မသန်စွမ်းကလေး၏မိခင်သည်အသက် ၅၀ တွင်အနားယူရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ သင်သည် "မသန်စွမ်းကလေး" အမျိုးအစားတွင်သင်၏ကလေးအတွက်ပင်စင်လျှောက်ထားသောအခါသတိပေးသင့်သည် (သို့မဟုတ်၊ သတိပေးခံရသော်လည်းမေ့ခဲ့သည်)၊
ဘယ်အချိန်မှာတစ်ဦးအသတ်မရှိမသန်စွမ်းပေးတော်မူ၏။ မသန်မစွမ်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့23 နှစ်ပေါင်းလျှင်။
အကန့်အသတ်မဲ့မသန်စွမ်းမှုကိုပေးသောအခါ။ အကယ်၍ မသန်စွမ်းအုပ်စု ၂ သည် ၃ နှစ်ဖြစ်ပါက။2နှစ်တွင်။ အောက်ပါကိစ္စများတွင်အကန့်အသတ်မရှိမသန်စွမ်းမှုအုပ်စုတစ်ခုကိုတည်ထောင်သည်။ ၁။ အသက် ၆၀ အရွယ်မသန်စွမ်းအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ ...
စစ်မှုထမ်းမုဆိုးမသည်ခင်ပွန်းသေဆုံးပြီးသည့်နောက်သူ၏ပင်စင်လစာကိုအပြည့်အ ၀ ရရှိနိုင်ပါသလား။ အများဆုံးဖွယ်ရှိသည်မဟုတ်။ ခေါင်းစဉ်အတွက်၊ အထူးအကျိုးခံစားခွင့်များမရှိပါကဆေးရုံများအားလက်ခံခွင့်မရှိပါ။ နင်ဘယ်လိုနေလဲ
လူမှု ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ၏တာဝန်ဝတ္တရားများမှာအဘယ်နည်း။ ဘယ်တာဝန်ဝတ္တရားတွေ၊ ကျေးရွာမှာအခမဲ့တာဝန်တွေရှိသလဲဆိုတာပြောပြပါ။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖော်ပြထားတဲ့ကန်ထရိုက်ရမယ်။ သင်ပေးဆောင်သော AND ...
breadwinner ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ပြည်နယ်မှပေးငွေများနှင့်အကူအညီများအားလုံးသည် breadwinner ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ပင်စင်လစာသာဖြစ်သည်။ ငွေပမာဏသည်လုပ်ခပမာဏနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၏ကြာချိန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပင်စင်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်…
EDV နှင့် EBC ။
EDV နှင့် EDK ။ အိမ်ယာနှင့်အများပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးဆောင်ရန် EBC (လစဉ်ငွေကြေးလျော်ကြေး) ။ တတိယအုပ်စု၏မသန်စွမ်းမှုအတွက်သင့်အား EDV (လစဉ်ငွေပေးချေမှု) ။ အရွယ်အစားမှာ ၁၄၄၄၊ ၉၅ ရူဘယ်ဖြစ်တယ်။ "လူမှုရေးအထုပ်" ၏အရွယ်အစား - ...
ကျွန်ုပ်သည်ဆေးခန်းတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်သောဆေးခန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်သူတို့နေထိုင်ရာအရပ်မှာပူးတွဲရမည်ဖြစ်သည်။ Ns တွင်ထိုကဲ့သို့သောလူနာများစွာရှိသည်။ သူတို့မှတ်ပုံတင်ရန်လာသည်၊ ၎င်းတို့ကိုကွန်ပျူတာထဲသို့သွင်းသည်၊ မှတ်ပုံတင်သည့်နေရာကိုဖော်ပြသည်။
သင်မော်စကိုလူမှုကတ်ပျောက်ဆုံးသွားလျှင်ဘာလုပ်သနည်း အဘယ်သို့ပြုသနည်း ဒဏ်ငွေပေးဆောင်?
သင်၏ Muscovite လူမှုရေးကဒ်ပျောက်ဆုံးလျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ ဘာလုပ်မလဲ? ဒဏ်ငွေပေးလား ဘယ်သူ့ထံ? သင်လက်ခံရရှိခဲ့သည့်နေရာကိုသွားပါ၊ သူတို့သည်သင့်အားအသစ်တစ်ခုဖြစ်စေပါလိမ့်မည်၊ သို့သော်ယခုသူတို့သည်သင့်အားယာယီလက်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အဆင်ပြေပါ။ လာပါ။
တံဆိပ် Vasily Chuikov အလုပ်သမားဝါရင့်ခွင့်မ
vasily chuikov သည် ၀ ါရင့်အလုပ်သမားအားအခွင့်အရေးပေးပါသလား Vasas Pupkin တံဆိပ်ကိုထိုအရာအားထည့်သွင်းပါကအရာရာအဆင်ပြေချောမွေ့သွားလိမ့်မည်။ ပေးအပ်ပေမယ့်အတူတကွဂုဏ်ထူးဆောင်အလှူရှင်တံဆိပ်နှင့်အတူသို့မဟုတ် ...
81 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,266 စက္ကန့်ကျော် Generate ။